दोस्रो वर्षमा आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। व्यावसायिक कारोबार सञ्चालन भएको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा शुभकामना दिँदै कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. रामहरि अर्यालले बीमा बजारमा कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति जनाएको बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा २१ वर्ष सेवा गरेका प्रदीपकुमार पौडेल १८ वर्षदेखि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा आबद्ध एक्मी इन्जिनियरिङ कलेज, काठमाडौंमा संलग्न छन्।
काठमाडौं स्कुल अफ मेकअप स्टुडियोले काठमाडौंको अनामनगरमा मेकअप स्कुलको सुरुवात गरेको छ ।
नेप्लिज एसोसियसन अफ अष्ट्रेलियन एजुकेसन रिप्रिजेन्टेटिभ्स (नाएर) ले आफ्नो अधिवेशन गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ।
फोस्टर्स बियर नेपालमै उत्पादन हुने
राज ब्रुअरी प्रालि र विश्वप्रसिद्ध बियर निर्माता एन्ह्युजर–बस्क इनवेभबीच विश्वका केही ख्यातिप्राप्त बियर ब्रान्डको उत्पादन र बिक्री सम्बन्ध खास साझेदार सहकार्यको सम्झौता भएको छ ।
पर्वतमा प्रभुको शाखा
प्रभु बैंकले पर्वतको मोदी गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित डिमुवामा र कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं. ७ स्थित विरेठाँटीमा शाखा विस्तार गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेशमै रोजगारदाता
डेढ दशकअघि रोजगारका लागि जापान पुगेका अर्घाखाँचीका अर्जुन अधिकारी अहिले रोजगारदाता भएर फर्किएका छन्। विगतमा उनी जापानमा जापनिजलाई नेपाली खानाको परिकारको स्वाद चखाउन व्यस्त थिए।
बार कोड नेपालले साटो कम्पनीको सिएलफोरएनएक्स सिरिजको इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर नेपाली बजारमा ल्याएको छ।
सवारीको आयु लम्ब्याउने उपाय
सवारी साधन किनेर मात्र हुन्न, यसको उचित हेरचाह नगर्ने हो भने सवारीसाधनको आयु छोटिँदै जान्छ। सवारीसाधनको हेरचाह भनेको व्यक्ति बेलाबखत चिकित्सककोमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गराएजस्तै हो सवारी साधन सर्भिस सेन्टरमा लगेर परीक्षण गराउनु।
बसुन्धरामा रहेको क्यानभास स्कुल प्लस टुका लागि राम्रो मानिन्छ। विज्ञान व्यवस्थापन मानवीकी संकाय पढाइ हुने यस स्कुलको सुविधायुक्त कक्षाकोठा तथा विद्यार्थी मैत्री वातावरणमा पढाउँदै आइरहेको छ।